(က)-အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်ထက်တွင်အင်္ဂလိပ်ဘာ သာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ယနေ့တိုင်တည်ဆဲ ဥပဒေ များ ဖြစ်သည့် ဥပဒေများအား မြန်မာဘာသာ သို့ ဘာသာပြန်ဆို ပြဋ္ဌာန်း ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃၃) ရက်မြောက်နေ့ (၂၅.၇.၂၀၁၇)
အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘဝကျရောက်ခဲ့စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေအားလုံးနီးပါးကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဥပဒေအချို့ကို မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ပါကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း ဥပဒေသစ် များကိုလည်း ရုံးသုံးမြန်မာစာဖြင့်သာ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည့် ဥပဒေများအနက် ၁၈၆၁ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော Penal Code ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာသာသာပြန် တရားဥပဒေနှင့် ဝေါဟာရများ အက်ဥပဒေအမှတ်(၂၇)အရ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီး ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေအဖြစ် တရားရုံး၊ ဥပဒေရုံးများတွင် တရားဝင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိတာ တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် မိမိအနေဖြင့် ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရေးသားတင်ပြခြင်းမဟုတ်ခဲ့သည့်အတွက် ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန်မသင့်ဟု လွှတ်တော် က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ဥပဒေပြုရေးအာဏာကို အပ်နှင်းခံထားရသည့် လွှတ်တော် အသီးသီးရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုသည် ဥပဒေ ပညာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု အပိုင်းများတွင် အားနည်းချက်များရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များအနေဖြင့် မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ ဥပဒေပြုခွင့်ရနိုင်မှသာလျှင် ဥပဒေ ကောင်းများ ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကိုလိုနီလောင်းရိပ်အောက်က လွတ်ကင်း၍ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဥပဒေပြုရေးကို အရှိန်အဟုြန်ဖင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သော လွှတ်တော်များဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
လွှတ်တော်များအနေဖြင့် မိမိ၏နိုင်ငံ၊ မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိတို့၏အခြေအနေ ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် ဥပဒေများကို ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကိုသာ အဓိကဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မူရင်းဥပဒေသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေဖြစ်ပါကလည်း လွှတ်တော် ၏ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်များအား သင့်လျော်မှန်ကန်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုရမည့်တာဝန်မှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ဌာန၊ ဝန်ထမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းတာဝန်သာဖြစ်သည်ဟု ယူဆမိပါကြောင်း၊ ဤရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေကို အကြိမ်ကြိမ်ဖြည့်စွက်၊ ပြင်ဆင်ခဲ့မှုတွေများရှိသကဲ့သို့ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်း ပညာရှင်များ၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံကောင်းမွန်ကောင်း ပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
ထို့အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁၅) အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရှိသည့် ပုဒ်မ ၄၅၀တွင် မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာ ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်ထက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ယနေ့တိုင်တည်ဆဲဥပဒေများ ဖြစ်သည့် ဥပဒေများအား မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆို ပြဋ္ဌာန်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုလိုနီခေတ်ကစတင်ပြီး ဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၉၅၄ ခုနှစ်အထိ တည်ဆဲဥပဒေများကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် Burma Code နောက်ပိုင်း Myanmar Code ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်သည့် ဥပဒေအတွဲ(၁)မှ (၁၃)အထိ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခဲ့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ဘာသာပြန်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ဥပဒေတစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းပြီး မြန်မာဘာသာပြန်ဥပဒေနှင့် ဥပဒေဝေါဟာရအကြံပေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ ကြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ အဲဒီကော်မတီက အချို့အချို့သော ဥပဒေ များကို ဘာသာပြန်ရာတွင် လေ့လာကြည့်ပါက ရာဇသတ်ကြီးနှင့် ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေရယ် နှစ်ခုကို ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
ပထမအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)က အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ငြိမ်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တည်ရှိနေသောဥပဒေများကို မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုရန်နှင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် တင်သွင်းထားသည့် ဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုရန် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ကို အထူးတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆောလျင်စွာတာဝန်ပေးအပ်သင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ် ချက်အရ ယခင်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် တည်ဆဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တည်ရှိနေသော ဥပဒေများကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုရေးအတွက် ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း၊၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်(၂၅) ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ၇က်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၆/၂၀၁၆)ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦးပါဝင်သော ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း ဘတ်ဂျက် အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ချိန်နှင့် နီးကပ်စွာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ဘတ်ဂျက်အဆင်သင်‌့တောင်းခံထားခြင်း မရှိခြင်း၊ အစိုးရအပြောင်းအလဲကာလဖြစ်နေခြင်း၊ အချို့သောကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကြောင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု မရှိခြင်းများကို တင်ပြလာခြင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို ပိုပြီးကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်လာခြင်းများကြောင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် သက်တမ်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၁/၂၀၁၇)နှင့် ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သမ္မတရုံးက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၁/၂၀၁၇)နှင့် ၁၅ ဦးပါဝင်သော ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကစတင် ကျခံသုံးစွဲဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကစတင်၍ လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
၁၆. ၃ လ. ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၃၀-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်၏ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ ကျင်းပသည့် ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဥပဒေဘာသာပြန်လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ငယ် ငါးဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အပြင် လုပ်ငန်းကော်မတီကနေ ဦးဆောင်ပြီး ဦးစားပေးပြန်ဆိုရမည့် ဥပဒေများကို စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ရှေ့နေချုပ်ရုံးတွင် ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင် ရုံးကို သီးခြားရုံးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များကို‌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီး အသေးစိတ် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ငယ်များ၏ လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများကို ၈-၅-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပကာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ငယ်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့က စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး ယနေ့အထိ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေ၏ပုဒ်မ ၉ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ဘာသာပြန်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေ ပေါင်း ၁၃၇ ခုရှိသည့်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ရာဇသတ်ကြီးနှင့် ကာလ စည်းကမ်းသတ် ဥပဒေအပါအဝင် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး အဓိကကျသည့်ဥပဒေများကို ဦးစားပေးပြန်ဆိုရန် အတွက် ကော်မရှင်က စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
မြန်မာဘာသာဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ရှေ့နေချုပ် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ ချုပ်ရုံးမှ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ မြန်မာဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ဥပဒေပေါင်း ၃၈၂ ခု ဘာသာပြန်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေကြမ်းတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်လို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တင်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းက တင်သည့် ဥပဒေကြမ်းရှိ သကဲ့သို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က တင်ပြသော ဥပဒေကြမ်းများလည်း ရှိပါကြောင်း၊ မူရင်းဥပဒေက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှိနေမည်ဆိုပါက ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကို အင်္ဂလိပ်စာသားဖြင့် လည်းကောင်း၊ မူရင်းဥပဒေက မြန်မာဘာသာဆိုပါက ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်အနေဖြင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားသော်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ယခင်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပဒေများကို ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို သီးခြားတာဝန် ပေးခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ သို့သော် ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင် သီးခြားပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်သောကော်မရှင်က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တည်ရှိနေသော ဥပဒေတစ်ရပ်ကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ရန်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုပါက ပြင်ဆင်လိုသောစကားရပ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး ရှေ့နေချုပ်ရုံးအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။